Iinkqubo ezili-15 ze-Mac MacBook Pros ngoku ziyafumaneka kwiwebhusayithi ehlaziyiweyo yaseMelika | Ndisuka mac
Oku ivala isangqa seMacs eboniswe kulo nyaka 2017 ifumaneka kwicandelo elihlaziyiweyo evela kwinkampani yeCupertino. Kule meko kukufika kwemodeli yokugqibela eseleyo yeMacBook Pro ngeTouch Bar (TB) ukufaka uluhlu lweMac ngesaphulelo emva kokuphinda ubuyisele, ulungise okanye ubuye.
Onke la maqela abuyiselwe kwaye ahlaziyiwe yi-Apple, le nkqubo yongeza iintambo kunye nezixhobo ezitsha ngokupheleleyo ukuze umsebenzisi onwabele iqela elingelilo elitsha kodwa phantse. Singatsho ukuba into ebalulekileyo yokonga imali xa uthenga iApple MacBook, kodwa kunjalo, kufuneka siyilumkise loo nto iwaranti kwezi mveliso ayifani nemveliso entsha kwaye ngokucacileyo ayonto intsha leyo.
Kuyinyani ukuba sineentsuku ezili-15 ezifanayo zokubuyisela imveliso ukuba asonwabanga ngayo, kwaye inkqubo yokubuyisela okanye yokulungisa iphelele yi-Apple. Abafuni ukuba uyibuyise kwaye yiyo loo nto befumana inkqubo engqongqo yokubuyiselwa ngaphambi kokuba bathengiswe. Nangona ezinye iiyunithi zibuyisiwe ngenxa yeengxaki zobuchwephesha, Zonke zihamba ngenkqubo yovavanyo ukuqinisekisa ukuba ziyahlangabezana nemigangatho esemgangathweni ye-Apple.
Eyona nto intle kwezi meko yile sithetha ngezaphulelo ezingaphezu kwama-euro angama-200, nangona iyinyani eya kuthi isihluthe ukukhulula ngokusemthethweni izixhobo, ingathi senzile. Kuzo zonke ezi mveliso ziqinisekisiweyo ziApple sinokukhetha ukwandisa ukogquma ngokungena kwisicwangciso sokukhusela iAppleCare. Kule meko yimodeli efikelela kwifayile ye- Iwebhu yaseMelika -ngokuhamba kwayo akukho nanye kwisitokhwe- kwaye okwangoku kwilizwe lethu ayikabikho, kodwa ngokuqinisekileyo ezokuqala zinokuqala ukufika kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iinkqubo ezili-15 ze-Mac MacBook Pros ngoku ziyafumaneka kwiwebhusayithi ehlaziyiweyo yase-US